Tun Tun's Photo Diary: May 2014
at 5/30/2014 11:54:00 PM2comments:
လက်ဖက်စိုက်ခင်းကို လိုက်ပို.ပြီးတော့ ဒုတိယနေ၇ာ ဖြစ်တဲ့ တောင်ပေါ်က Tower တိုင် ရှိတဲ့ နေ၇ာကို လိုက်ပို.ပေးပါတယ်။ အဲဒီမြို.ရဲ. အမြင့်ဆုံးနေ၇ာ ထင်ပါတယ်။ ပင်လယ်ေ၇မျက်နှာပြင်အထက် ဘယ်လောက် လဲ မမှတ်မိတော့ဘူး။ အဲ့ဒီနေ၇ာမှာ GSM Tower တိုင်တွေ ရှိပါတယ်။ လှေကားနဲ. တက်လို.၇တဲ့ Tower ပေါ်ကို တက်ပြီး ၇ူခင်းတွေ ကြည့်လို.၇ပါတယ်။ အသက်ကြီးပိုင်း tourists တွေကတော့ မတက်ပဲ အောက်ကပဲ စောင့်နေခဲ့ကြတယ်။
ဒါကတော့ Tower ပေါ်ကနေ မြင်၇တဲ့ ၇ူခင်းပါ။ ကျွန်တော်တည်းတဲ့ Hotel Equatorial ကို ဒီနေ၇ာကနေလှမ်းမြင်၇ပါတယ်။ စိမ်းစိမ်းစိုစို သစ်ပင်တွေနဲ. ဖုံးလွမ်းထားတဲ့ တောင်တန်းတွေ အထပ်ထပ် မြင်၇ပါတယ်။
at 5/23/2014 09:21:00 AM4comments:
at 5/09/2014 08:49:00 PM Links to this post No comments:
at 5/03/2014 04:33:00 AM Links to this post3comments:
at 5/01/2014 01:46:00 AM Links to this post No comments: